Tag: purchasing content | Martech Zone
Tag: purchasing content
Izu a, anyị jụrụ ndị ọbịa anyị na-eji Zoomerang ma ọ bụrụ na ha ga-azụta ọdịnaya iji gbakwunye blog ha ma ọ bụ weebụsaịtị: 30% kwuru Ọ dịghị mgbe! Nke ahụ abụghị eziokwu! 30% kwuru na ha nwere ike ịzụta ụfọdụ nyocha ma ọ bụ data 40% kwuru na ha ga-azụta ọdịnaya Ọ bụ ezie na m ghọtara oge ịzụrụ ọdịnaya dị na mpụga, anyị na ndị ahịa anyị ahụla ezigbo nsonaazụ. DK New Media. Oge ụfọdụ, ọ kacha mma iche maka ịzụta ọdịnaya dị na mpụga dị ka ịnye ndị ọrụ ngo. Ga-eme
Blog nke Andy, onye njem ala ahia, aghaghi igu ya na etinyegoro m onwe m nwa oge. M na-echeta oge mbụ Andy zoro aka na blog m - enwere m obi uto! Andy bụ ezigbo ihe atụ ebe m ga-achọ ka blog na azụmaahịa m dịrị na afọ ole na ole. Ihe dị ịtụnanya gbasara ịde blọgụ bụ na imetụ onwe gị aka na-enye ohere maka echiche pụrụ iche. Echiche ọ bụla pụrụ iche, ọbụlagodi na ha gosipụtara otu